Articles Published in February, 2016 | Sagal Radio Services
Boko Haram oo 50 ruux ku dilay weeraro ay ka geysatay waqooyi Bari Nigeria
Sagal Radio Services • News Report • February 1, 2016
Ku dhowaad 50-ruux ayaa la soo wariyay in lagu dilay waqooyi bari dalka Nigeria, markii dabley looga shakisan yahay inay taabacsan yihiin Boko Haram ay ka geysatay weeraro qaraxyo iyo rasaas isugu jiray.
Madaafiic Hoobiyeyaal oo ku soo dhacay nawaaxiga Xarunta Madaxtooyada
Tiro Madaafiic hoobiyeyaal ayaa ku dhacay nawaaxiga Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyadoo madaafiicdan ay sababeen khasaare kala duwan.
Waaxda Socdaalka Soomaaliya a oo soo bandhigtay warqad codsi uga timid Somaliland
Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigay warqad codsi ah oo ka timid Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland, kaasoo ahaa in Xafiis laga qaato Baasaboorka Soomaaliga ka furaan magaalada Hargeysa.
MADAXWEYNE XASAN: Ciidanka AMISOM way ka wax-tar badan yihiin kuwa Qaramada Midoobay
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay in Dowladdiisu ay weli ku tiirsan tahay Ciidamada ka socda Dalalka Afrika qaarkood ee ku sugan Soomaaliya (AMISOM).
Hay’ada Caafimadka Adduunka WHO oo xaalad qatar ah ku tilmaantay cudurka Zika
Sagal Radio Services • News Report • February 2, 2016
Hay’ada caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ku tilmaantay cudurka Zika Virus inuu yahay mid khatar qatar ku ah caalamka, kadib markii uu si baaxad leh ugu fiday dalalka Latinka.
General Cali Gaab oo ka hadlay madaafiic shalay ku dhacday meel ku dhow Madaxtooyada
Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir Gen.Cali Xirse Barre Cali Gaab ayaa ka hadlay madaafiic qasaare geysatay oo shalay ku dhacday meel aan ka fogeyn dhismaha madaxtooyada ee magaalada Muqdisho.
Kenya oo soo iibsatay gawaari gaashaaman (Sawirro)
Dowladda Kenya ayaa soo iibsatay gawaari gaashaaman oo ay ku howl geli doonaan Ciidamadeeda, si ay u sugaan ammaanka gudaha dalkeeda iyo xuduuda, iyadoo munaasabad lagu soo bandhigayay gawaaridaas uu ka qeyb galay Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Warqad qoraal ah oo ka soo baxday Xafiiska Taliyaha Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in si KMG loo joojinayo duulimaayadii diyaaradaha ee Muqdisho iyo Hargeysa.
Dowladda Soomaaliya oo baareysa Diyaaradda Daallo iyo Meydka qof ka dhacay oo la keenay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • February 3, 2016
Dowladda Soomaaliya ayaa baareysa diyaarad ay leedahay Shirkadda Daallo Airlines, taasoo shalay deg deg dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho, kadib muddo sodon daqiiqo ku dhow oo hawada ku jirtay, diyaarada ayaa soo degtay, iyadoo dhinac ka mid ah uu ka muuqday duleel weyn.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada oo beeniyay in la hakiyay duulimaadyadii Muqdisho iyo Hargeysa
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa beeniyay in la hakinayo duulimaadyada Muqdisho iyo Hargeysa.